Maitiro Ekuchengeta Magetsi Bhasiketi Bhatiri Hutano | ebike Shuangye
musha Blog nhau Maitiro Ekuchengetera Emagetsi Bike Bhatiri Hutano
Maitiro Ekuchengetera Emagetsi Bike Bhatiri Hutano
Zuva ： 2020-07-09 Zvikamu:nhau Views: 2,282 maonero
Bhatiri remagetsi bhasikoro ndechimwe chikamu chakakosha chee-bhasikoro, inogona kusarudza kuti e-bhasikoro inogona kuenda kwenguva yakareba sei. Kunyangwe bhatiri remagetsi bhasikoro rakatsiviwa zviri nyore, seShuangye bhasikoro remagetsi inochinja bhatiri dhizaini inobviswa, asi ikozvino vazhinji e bhatiri bhasikoro vachiri kutsiva zvisingaiti Uye mutengo wekutsiva e bhasikoro bhatiri hauna kudhura. Maitiro ekuchengeta bhatiri rako remagetsi bhasikoro rine hutano chinhu chakakosha. Tevere kune mamwe matipi ekurebesa hupenyu hwayo.
Kana isiri kushandiswa, chengeta yako e-bhasikoro munzvimbo inotonhorera, yakaoma. Dzivisa kusiira yako bhasikoro muzuva rakananga kuti ufungisise mashandiro ebhatiri ree-bhasikoro.
Kana isiri kushandiswa kwenguva yakareba, usati wachengetera iyo e-bhasikoro, ita shuwa kuti bhatiri remagetsi bhasikoro richine chaji mukati maro. Sezvineiwo, bhatiri rinofanira kubhadhariswa pakati pe40% ne80%. Dzivisa hunhu hwakapera simba mushe uye kuchaja bhatiri zvizere kudzikisira kukuvara kwebhatiri.
Munguva yechando, kana iwe uchida kuchengeta yako e-bhasikoro munzvimbo inotonhora, senge yekunze kweimba kana mugaraji. Izvi zvinoteerera kudziisa bhatiri remagetsi bhasikoro usati wachaja. Imwe bhatiri remagetsi bhasikoro rine bvisika basa, zviri nyore kwazvo kubvisa bhatiri uye chitoro mumba. Saka unogona kuchaja iyo zvakananga.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti kugara uye kuzere kuburitsa bhatiri kunokuvadza bhatiri. Deredza nguva dzekurega kubhadharisa bhatiri kunosvika 0%. Usamirira kuchaja kudzimara magetsi apera, chengetedza tsika yekuchaja nguva dzose.
Ingoshandisajaja iyo inopa neyemagetsi bhasikoro; neimwe nzira, kana iwe uchida imwezve charger se backup, tora kubva kune wekutanga mugadziri. Iyo inogona kudzikisira zvisina basa dambudziko. Kuwedzeredza zvakare chinhu chekukuvadza bhatiri remagetsi bhasikoro. Iye zvino vazhinji vanogadzira vanopa smart charger iyo yatove yekuisajaja kuchaja bhatiri kusvika ku90% kana 100%.
Izvi zvinodzivirira zvinokuudza maitiro ekuchengetedza bhatiri remagetsi bhatiri riine hutano. Kana iwe uchizviita, pamwe bhatiri ree-bhasikoro rinofanira kugara pakati pemakore matatu kana mana. Chaizvoizvo, kutenga bhasikoro remagetsi ine bvisika bhatiri dhizaini kunogona kureba hupenyu kune e-bhasikoro.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve bhatiri remagetsi bhasikoro kana yemagetsi bhasikoro info, iwe unogona kutarisa zvakapfuura zvinyorwa kana kushanyira Yedu Yepamutemo Webhusaiti, zvakare sarudza kusiya meseji pazasi.
Tags:e-bhetri bhetri bhatiri remagetsi bhasiketi
Prev: Nzira yekuziva sei iyo yakareba renji yemagetsi bhasikoro?
Next: Chii chinonzi simba batsira bhasikoro?
Chinhu Chikuru Nezve E-bhasikoro Bhatiri Musika
36V yakavanzwa e bike bhatiri H1-350
Bhatiri yemagetsi bhasikoro: zvinhu zvitatu zvaunofanirwa kuziva
Chii chinodhaka motokari bhasikoro bhetri